ओस्कार अवार्ड वितरण हुँदा अहिलेसम्मकै ठुलो गल्ती ! – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:08:03
जापानी समय : 06:23:03
Tag: ओस्कार अवार्ड वितरण हुँदा अहिलेसम्मकै ठुलो गल्ती !
बर्ष २०१७ को एकेडेमी अवार्ड (ओस्कार) सोमबार बिहान वितरण भयो । फिल्म ‘मुनलाइट’ले बर्ष २०१६ मा प्रदर्शित सबै फिल्मलाई पछि पार्दै उत्कृष्ठ ठहरियो । तर यो फिल्म उत्कृष्ट बन्दा ओस्कार अवार्ड अहिलेसम्मकै विवादित पनि रहस्यमय बन्यो ।
कुरा हो, ‘ला ला ल्याण्ड’ पहिला उत्कृष्ट बोलिनु अनि त्यसपछि ‘मुनलाइट’लाई अवार्ड प्रदान गरिनु् । स्टेजमा अवार्ड वितरण गर्न अतिथी बनेका वारेन बिट्टी र फाय डुनावेले सुरुमा ‘ला ला ल्यान्ड’ को नाम उत्कृष्ट फिल्ममा घोषणा गरे । त्यसपछि सो फिल्मको टिम अवार्ड लिन स्टेजपनि चढ्यो तर गल्ती बोल्दै अवार्ड दिईएन् । अनि पुनः ‘मुनलाइट’लाई उत्कृष्ट फिल्म भनियो ।
Posted in कला/मनोरन्जनTagged ओस्कार अवार्ड वितरण हुँदा अहिलेसम्मकै ठुलो गल्ती !